ဖလားအိမ်မက်အတွက် ပရိတ်သတ်တွေကို သတင်းစကားပါးလိုက်တဲ့ မာရှယ် – FBV SPORT NEWS
ပရီးမီးယားလိဂ်အတွက် အိုးထရက်ဖို့ဒ်မှာ ကန်မယ့် အင်္ဂလန်ဒါဘီပွဲ မတိုင်ခင် နည်းပြဆိုလ်းရှားရဲ့ အချစ်တော် တိုက်စစ်မှူးမာရှယ်က သူ့ပရိတ်သတ်တွေအတွက် သတင်းစကားပါးလိုက်တယ်လို့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ညနေခင်းသတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်.
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ တိုက်စစ်မှူးမာရှယ်ဟာ နိုင်ငံပွဲမှာ ဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့် ယူနိုက်တက်ရဲ့ အရေးကြီးပွဲစဉ်တွေမှာ မပါနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မာရှယ်ဟာ အခုရက်ပိုင်း ဒဏ်ရာပြဿနာတွေဟာ အခြေအနေအတော်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီးပရိတ်သတ်တွေအတွက် ယူနိုက်တက်ဟာ ဖလားအိမ်မက်နဲ့ နီးစပ်နေပြီဖြစ်ပေမယ့် သူမပါဝင်နိုင်တဲ့အတွက် တောင်းပန်စကားပြောကြားခဲ့တာလို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။
“ယူနိုက်တက်ဟာ ခုဆို ဖလားအိမ်မက်နဲ့နီးစပ်နေပါပြီ။ မကြာခင်မှာလည်း ပရီးမီးယားလိဂ်အတွက် လီဗာပူးနဲ့ ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက် ဆိုးဝါးတာက အရေးကြီးပွဲတွေမှာ မပါဝင်နိုင်ခဲ့တာကိုပါ. ပရိတ်သတ်တွေကိုလည်း အားနာမိပါတယ်။ မကြာခင်မှာ အကောင်းဆုံးပုံစံတွေနဲ့ ကျွန်တော်ပြန်လာနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်”ဆိုပြီး မာရှယ်က ပြောကြားခဲ့တာပါ။
လာမယ့် စူပါဆန်းဒေးမှာ ပရီးမီယားလိဂ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ ကလော့ရဲ့ ကြိုးကြာနီတွေနဲ့ ဆိုလ်းရှားရဲ့ သရဲနီတွေဟာ အစဉ်အလာကြီးတဲ့ အိုးထရက်ဖို့ကွင်းမှာ ကန်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
သမိုင်းတစ်လျောက် ခါးသီးပြိင်ဖကိတွေဖြစ်တဲ့ ဒီနှစ်သင်းမှာ လက်ရှိအနေအထားအရ လီဗာပူးဟာ တော်တော်ရုန်းကန်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပါ။
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်အတွက် အမှတ်တွေတော်လျောက်ဆုံးရှုံးနေတဲ့ ကြိုးကြာတွေဟာ ယူနိုက်တက်ကို ရှုံးခဲ့မယ်ဆို ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်က ပျက်ပြယ်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာလည်း မန်ယူအသင်းသာ လီဗာပူးကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့မယ်ဆို မန်းစီးတီးအသင်းဟာ ကန်စရာမလိုပဲ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို သိမ်းပိုက်သွားနိုင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်နည်းပြဆိုးလ်းရှားကတော့ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားထက် ယူရိုပါလိဂ်ကို အာရုံပိုစိုက်နေတယ်လို့ ယူဆရပြီး သူ့ရဲ့ ဆီးမီးပြုတ် အစဉ်အလာကို ရိုက်ချိုးခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်အတွက် အခုလို အရေးကြီးအချိန်တွေမှာ ဒဏ်ရာရနေတဲ့ မာရှယ်ဟာ သူမပါဝင်နိုင်တဲ့အတွက် တော်တော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပြီး ဒီလိုအရေးကြီးပွဲတွေကို ပါဝင်ချင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။
“ယူနိုက်တက်ကအကြီးဆုံးအမှားကိုလုပ်ခဲ့တယ်၊ ကာဗာနီဟာဆေးမြီးတိုပဲ”လို့ဆိုတဲ့ စပါးမန်နေဂျာဟောင်း